Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa ngimusha futhi ngisenokuningi kakhulu okufanele ngikwenze empilweni. Ingabe ngisengayithola insindiso uma ngilinda kuze kube yilapho sengimatasa kancane ukuze ngikholwe Kuye? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Impilo yomuntu ayinakho nhlobo ukufudumala, futhi ayinabo ubumnandi noma ukukhanya komuntu – kodwa usezijwayeze yona, babekezelela impilo ebashintsha lokhu okubafanele ngokugijimela izinto ngaphandle kokuzuza utho. Ngokuphazima kweso, usuku lokufa kuyasondela, umuntu afe ukufa okunomunyu. Kulo mhlaba, akakaze aphumelele nakokukodwa, noma azuze utho – ufike ngokuphuthuma, wahamba ngokuphuthuma futhi. Akukho kulokho okusemehlweni Ami okungilethele utho, noma okuthathe okuthile, ngakho-ke abantu bazizwela sengathi umhlaba awunabo ubulungiswa. Kodwa akekho ofuna ukuhamba. Balinde nje usuku okuzofika ngalo isithembiso Sami phakathi kwabo sivela ezulwini, okuzobavumela, ngesikhathi bedukile, ukuthi baphinde babone impilo yangunaphakade.
kwesithi “Izwi Lamashumi Amabili” Lamazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana Ezwini Elivela Lisenyameni
Abantu bahlale bethanda izwe, beba namathemba amaningi, ikusasa labo belifunela okuningi ngokwedlulele, futhi befuna izinto eziningi ezibizayo. Bahlale becabanga futhi behlelela inyama yabo futhi abanandaba nokufuna indlela yokukholwa kuNkulunkulu. Izinhliziyo zabo zithunjwe uSathane, abasamhloniphi uNkulunkulu, banikela izinhliziyo zabo kuSathane. Kodwa umuntu wadalwa uNkulunkulu. Ngakho umuntu walahlekelwa ubufakazi, okusho ukuthi walahlekelwa inkazimulo kaNkulunkulu. … Awukuzwa ukuba yigugu kokukhaya uma uphila kuko, kodwa uzokuqaphela ukuba yigugu kwako lapho usuphila ebusuku obumnyama. Uzokuzwa ubuhlungu ngaleso sikhathi. Uzizwa ukahle okwamanje, kodwa usuku luzofika lapho uzokuzwa khona ubuhlungu. Lapho lolo suku lufika futhi kwehla ubumnyama nokukhanya kuyobe kungasekho, ukuzisola kwakho kuyobe sekwephuze kakhulu. Kungenxa yokuthi awukawuqondi umsebenzi wamanje ukuthi uyehluleka ukwazisa isikhathi sakho manje. Lapho umsebenzi wendawo yonke uqala, okuchaza ukuthi lapho yonke into engiyisho namuhla seyenzeka ngempela, abantu abaningi bazophakamisa amakhanda abo ngokukhala okunomunyu. Ingabe lokho akusikhona ukuwela ebumnyameni ngokukhala nokugedla kwamazinyo?
Uma ningawafuni amathuba okupheleliswa uNkulunkulu, uma ningalilweli ithuba lokupheleliswa uNkulunkulu, ekugcineni niyogcwala usizi. Manje ithuba elihle lokupheleliswa, isikhathi esikahle. Uma ningakufuni ngobuqotho ukupheleliswa uNkulunkulu, ngemva kokuphothulwa komsebenzi Wakhe, kuyobe sekwephuze kakhulu ngoba liyobe selinilahlekele leli thuba. Akunandaba ukuthi izifiso zenu zinkulu kangakanani, uma kungasafanele uNkulunkulu enze umsebenzi, ngaphandle kokunaka imizamo eniyenzayo, ngeke nisakwazi ukukuzuza. Kumele nilibambisise leli thuba nibambisane, lapho uMoya Ongcwele wenza umsebenzi onamandla; uma nizophuthwa yileli thuba, ngeke ninikwe elinye, akunandaba ukuthi nizikhandla kangakanani.
kwesithi “Yazini Intando KaNkulunkulu Nizuze Ukuphelela” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Akekho owaziyo noma izikhumbuzo eziphindaphindwayo zikaNkulunkulu nokunxusa Kwakhe kwenzeka ngenxa yokuthi ezandleni Zakhe uphethe inhlekelele engakaze ibonwe aseyilungisile, engeyukumelwa yinyama nomphefumulo womuntu. Le nhlekelele ayisona isijesiso senyama nje, kodwa nesomphefumulo futhi. Kumele ukwazi lokhu: Lapho uhlelo lukaNkulunkulu lungafezwa lwenziwa ize nalapho izikhumbuzo nokunxusa Kwakhe kushaywa indiva, lokho kuyomthukuthelisa kangakanani? Lokhu ngeke kufane nalutho oseluke lwenzeka, noma lwezwiwa noma iyiphi indalo. Ngakho-ke ngithi, le nhlekelele ayikaze ibe khona futhi ngeke iphinde ibe khona enjengayo. Lokhu kungenxa yokuthi iyodwa kuphela indalo nensindiso ohlelweni lukaNkulunkulu. Lesi isikhathi sokuqala futhi nesokugcina.
Okwedlule：Abanye abantu bathi akekho nhlobo uNkulunkulu; kungani lo mbono uyiphutha? Singaqiniseka kanjani ukuthi uNkulunkulu ukhona?
Abantu bavame ukuthi, “Ubuhle bunomvuzo wakho, ububi ukujeziswa kwakho,” khona-ke kungani uNkulunkulu engasusi bonke abantu ababi?